उच्च रक्तचाप : कारण र जीवनशैली व्यवस्थापन – Health Post Nepal
२०७६ वैशाख २२ गते १०:४३
सन् २०२५ सम्म ५० प्रतिशत पुरुषमा उच्चरक्तचाप देखिने : अनुसन्धान
उच्च रक्तचाप जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या हो । मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै उच्च रक्तचाप र त्यसका जटिलताहरू विश्वका विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै देशको साझा चुनौती बनेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हाल एक अर्ब मानिसमा उच्च रक्तचापको समस्या छ, जसमा दुईतिहाइ विकासोन्मुख देशका नागरिक छन् ।
सन् २०२५ सम्म यो संख्या बढेर १ अर्ब ५६ करोड पुग्ने आकलन गरिएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका एकतिहाइ युवा उच्च रक्तचापबाट पीडित छन् ।
उच्च रक्तचापबाट बर्सेनि ८० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । दक्षिणपूर्र्वी एसियामा मात्र प्रतिवर्ष १५ लाख मानिसले उच्च रक्तचापबाट जीवन गुमाउँछन् ।
विश्वमा मुटु एवम् मुटुको रक्तनलीजन्य रोग मृत्युको प्रमुख कारण बनेको छ । सन् २०१७ मा १ करोड ७९ लाख मानिसको मृत्यु मुटु एवम् मुटुको रक्तनलीजन्य रोगबाट भयो, जुन कुल मृत्युको ३१ प्रतिशत हो ।
त्यसमा पनि ८५ प्रतिशतको मृत्यु हृदयाघात र मस्तिष्काघातबाट भएको छ । हृदयाघात र मस्तिष्काघातको प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप हो ।
हृदयाघातबाट हुने मृत्युका लागि ४५ प्रतिशत र मस्तिष्काघातबाट हुने मृत्युका लागि ५१ प्रतिशत उच्च रक्तचाप मात्र जिम्मेवार मानिन्छ ।
यसका अतिरिक्त उच्च रक्तचापले मुटुरोग, मिर्गौलारोग, मधुमेह आदि पनि गराउँछ । विश्वमा तीनमध्ये एक वयस्कमा उच्च रक्तचाप रहेको, तीनमध्ये एकलाई उच्च रक्तचाप भएको थाहा नभएको र तीनमध्ये एकको उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा नरहेको बताइन्छ ।
नेपालमा पनि नसर्ने रोगको महामारी बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ मा कुल मृत्युको ६६ प्रतिशत नसर्ने रागबाट भयो । मुटु एवम् मुटुको रक्तनलीजन्य रोगबाट मात्र ३० प्रतिशतको मृत्यु भयो । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१७ अनुसार १७ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुषमा उच्च रक्तचापको समस्या छ । त्यस्तै, २४ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषमा पूर्व–उच्च रक्तचाप (प्रि–हाइपरटेन्सन) छ ।
ननकम्युनिकेबल डिजिज रिक्स प्याक्टर सर्वे २०१३ का अनुसार २५.७ प्रतिशत मानिसमा उच्च रक्तचाप छ । विगत पाँच वर्षका विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट सिन्धुलीको ग्रामीण क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत, धुलिखेलमा २७.७ प्रतिशत, पोखरामा २८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ३८.९ प्रतिशत र काठमाडौंमा ३२.५ प्रतिशत मानिसमा उच्च रक्तचाप रहेको पाइएको छ ।
मुटुको नियमित खुम्चिने र फैलिने क्रियाबाट शुद्ध रगत शरीरभरि पुग्दछ । रगतको वहावबाट रक्तनलीको भित्तामा पर्ने दबाब नै रक्तचाप हो । मुटु खुम्चिने अवधिको दबाबलाई सिस्टोलिक र मुटु फैलिने अवस्थाको दबाबलाई डायस्टोलिक प्रेसर भनिन्छ । बोलिचालीको भाषामा सिस्टोलिक प्रेसरलाई माथिको र डायस्टोलिक प्रेसरलाई तलको प्रेसर भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
सामान्यतः सिस्टोलिक प्रेसर १०० देखि १४० एमएम एचजी र डायस्टोलिक प्रेसर ६० देखि ९० एमएम एचजीसम्म हुन्छ । सिस्टोलिक प्रेसर १४० र डायस्टोलिक प्रेसर ९० एमएम एचजीभन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ ।
उच्च रक्तचाप प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राइमरी हाइपरटेन्सनको निश्चित कारण थाहा छैन अथवा विभिन्न मिश्रित कारणहरूबाट रक्तचाप बढ्छ । ९० देखि ९५ प्रतिशत उच्च रक्तचापमा प्राइमरी हाइपरटेन्सन पाइन्छ । ५ देखि १० प्रतिशत उच्च रक्तचाप मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हर्मोनल समस्या, औषधिको पाश्र्व प्रभाव आदिका कारण हुन्छ, जसलाई सेकेन्डरी हाइपरटेसन भनिन्छ ।
अमेरिकाको नेसनल हार्ट, लंग्स एन्ड ब्लड इन्स्टिच्युटको प्रिभेन्सन, डिटेक्सन, इभालुएसन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ हाई ब्लड प्रेसरसम्बन्धी सातौँ रिपोर्टअनुसार सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर १२० भन्दा कम र डायस्टोलिक प्रेसर ८० भन्दा कमलाई सामान्य मानिएको छ । त्यस्तै, सिस्टोलिक प्रेसर १२० देखि १३९ र डायस्टोलिक ८० देखि ८९ एमएम एचजीलाई प्रि–हाइपरटेन्सन भनिएको छ ।
सिस्टोलिक १४० देखि १५९ र डायस्टोलिक ९० देखि ९९ एमएम एचजीलाई स्टेज फस्ट हाइपरटेन्सन र सोभन्दा बढी भएमा स्टेज सेकेन्ड हाइपरटेन्सन भनिएको छ ।
क) उमेर : सामान्यतया उमेर बढ्दै जाँदा रक्तनलीमा आउने संरचनागत परिवर्तन (साँघुरो र कडापन)ले रक्तचाप पनि बढ्ने गर्दछ ।
ख) आनुवंशिकता :रक्तचाप निर्धारणमा जिनको भूमिका रहने विश्वास गरिन्छ । एउटै जाइगोटबाट जन्मिएका जुम्ल्याहा बच्चामध्ये एकलाई उच्च रक्तचाप भएमा अर्कोलाई पनि भएको पाइएको छ । त्यस्तै, सामान्य रक्तचाप भएका आमाबुबाबाट जन्मेका बच्चाहरूमा पछि उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना ३ प्रतिशत मात्र हुन्छ, तर आमाबुबा दुवैमा उच्च रक्तचाप भएमा बच्चामा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना ४५ प्रतिशत हुन्छ ।
ग) जातीयता : तुलनात्मक रूपमा काला(अफ्रिकन–अमेरिकन)हरूमा अरूभन्दा रक्तचाप बढी पाइएको छ ।
भान्छामा प्रयोग गरिने तयारी नुनका अतिरिक्त मासु, दूध, सागपात, फलफूलमा पनि नुनको मात्रा हुन्छ । झनै प्रशोधित एवम् तयारी (पत्रु) खानाहरूमा नुनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ, जसले मानिसले प्राप्त गर्ने नुनको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । मानव जातिको विकासक्रम हेर्दा कृषि पेसा सुरु गर्नु (५, ००० देखि १०, ००० वर्ष )अघि एक व्यक्तिले प्रतिदिन १ ग्राम नुन प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन आजको भन्दा १० गुणा कम हो ।
अहिले पनि अफ्रिका एवम् दक्षिण अमेरिकाको जंगल वा आसपास बस्ने आदिवासीहरूले दैनिक ३ ग्रामभन्दा कम (कतिले त ५०० मिग्रा) नुन सेवन गर्छन् । उनीहरूको रक्तचाप उमेरअनुसारसमेत बढेको पाइँदैन र जीवनभर सामान्य रक्तचाप रहने पाइएको छ ।
यिनीहरूले लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन घटाउँछन् । फलफूल पोटासियमको राम्रो स्रोत हो । यसले सोडियमको निष्कासनमा सहयोग गर्दछ, रक्तनलीहरूलाई फैलाउँछ र रक्तचाप कम गर्न सहयोग गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दैनिक ५ मात्रा (४०० ग्राम) सागपात र फलफूल सेवन गर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ९८ प्रतिशत मानिसले मापदण्डभन्दा कम फलफूल एवम् सागपात सेवन गर्ने गरेको देखाएको छ ।
अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी र अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले रक्तचाप सामान्य (१२०/८० भन्दा कम) रहेको अवस्थामा वार्षिक रूपमा रक्तचाप मापन गर्र्न र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सुझाएको छ । त्यस्तै, बढ्दो रक्तचाप (सिस्टोलिक १२० देखि १२९ र डायस्टोलिक ८० भन्दा कम)को अवस्थामा ३ देखि ६ महिनामा पुनः परीक्षण गर्न र जीवनशैली व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
फस्ट स्टेज हाइपरटेन्सनमा कार्डियोभास्कुलर रिक्स १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा जीवनशैली व्यवस्थापन र ३ देखि ६ महिनामा पुनः रक्तचाप परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, कार्डियोभास्कुलर रिक्स १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा औषधि सेवनका साथै जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक महिनामा रक्तचाप नियन्त्रणमा आएमा पुनः ३ देखि ६ महिनामा रक्तचाप परीक्षण गर्नुपर्छ र नियन्त्रण नभएमा औषधि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उच्च रक्तचाप जनस्वास्थ्यको जल्दोबल्दो समस्या हो । यो अव्यवस्थित जीवनशैलीबाट हुने भएकाले रोकथाम एवम् उपचार जीवनशैली व्यवस्थापनबाटै गर्नुपर्छ । उचित आहार, विहार, विचार र व्यवहारले उच्च रक्तचाप र त्यसबाट हुन सक्ने जटिलता कम गरी व्यक्तिलाई स्वस्थ सहन र उत्पादनशील एवम् गुणस्तरीय जीवन जिउन सघाउँछ ।
Tags: उच्च रक्तचाप, जीवनशैली व्यवस्थापन, डा. रमेश केसी
3 thoughts on “उच्च रक्तचाप : कारण र जीवनशैली व्यवस्थापन”
Sarita Bajagain says:
Wounderful article. Thank you
Pingback: उच्च रक्तचाप र यसको व्यवस्थापन – THINK NOW
LeaveaReply to Sarita Bajagain Cancel reply